အလူမီနီယံ Die Casting မှို မှအကောင်းဆုံး အလူမီနီယံ Die Casting မှို မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ အလူမီနီယံ Die Casting မှို နှင့် Optimum စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များအာမခံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. လုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။ ဤကျယ်ပြန့်မတူညီကြစက်မှုလုပ်ငန်း applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစံချိန်စံညွှန်းများ၏ထုတ်လုပ်သည်နဲ့အလွယ်တကူ client ကိုလိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အများစုမှာစျေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှာပူဇော်စေ။
ပုံစံ - CHN9E
Casting မှိုသည်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးများသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်.Die Casting မှိုသည်အထီးမှိုနှင့်အမျိုးသမီးမှိုဖြစ်သည်,သွန်းသောအရာကိုအထီးမှိုနှင့်အမျိုးသမီးမှိုကြားအခေါင်းပေါက်ထဲသို့ထိုးသွင်းသည်.
Die casting molds များတွင်အဓိကအားဖြင့် die ပါဝင်သည်-ပူအခန်းသေဘို့အမှိုများပုံသွန်း-ပုံသွင်းစက်များ,အလျားလိုက်အအေး-အခန်းသေသည်-ပုံသွင်းစက်များ,ဒေါင်လိုက်အအေး-အခန်းသေသည်-ပုံသွင်းစက်များ,သေ-ဒေါင်လိုက်အပြည့်အစုံအတွက်မှိုများကိုပုံသွင်းသည်-ပုံသွင်းစက်များ,မဟုတ်-ferrous metal သေသည်-သတ္တုများ,နှင့် ferrous သတ္တုသေဆုံးလျက်ရှိသည်-မှိုပုံသွင်းခြင်း.
မှိုခဲချိန်:မှိုဒီဇိုင်းအတည်ပြုပြီးနောက် ၁ လခန့် T1 နမူနာ
ထုတ်လုပ်မှုအချိန်:၀ ယ်ယူမှုအရခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃ လ
ငွေပေးချေမှု:၃၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；50%တီ/T သိုက်；20%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/aluminum-die-casting-mold.html
အကောင်းဆုံး အလူမီနီယံ Die Casting မှို ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် အလူမီနီယံ Die Casting မှို ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊